(Igumbi A) Igumbi elihle lokulala eliphindwe kabili i-Euston - I-Airbnb
(Igumbi A) Igumbi elihle lokulala eliphindwe kabili i-Euston
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Suraj
Ifulethi lethu lisenkabeni yeLondon, okuyibanga elihamba ngezinyawo elingaphansi komzuzu owodwa ukuya esiteshini sase-Euston kanye nemizuzu emi-5 ukuya eKings Cross St Pancras International Station.
- I-British Library (uhambo lwemizuzu emi-5)
- IBritish Museum (uhambo lwemizuzu eyi-10)
- Imakethe yeCamden edumile (uhambo lwemizuzu eyi-10)
- Oxford Street (20-25 imizuzu ukuhamba)
Siphinde sinikeze izivakashi zethu mahhala: i-WiFi esheshayo, ithawula lesandla, ithawula lokugeza kanye netiye nekhofi.
Izici zethu zokulala ezizimele ezilula, ezihlanzekile & ezivulekile: ukufakwa phansi ngokhuni, amafasitela acwebezelisiwe kabili, itafula eliseceleni, amasokhethi amapulagi amaningi ikhabethe lezingubo kanye nendawo ekahle yokuhlala: amaholide, uhambo lwebhizinisi kanye nazo zonke izivakashi ezifika nxazonke.
Ikhishi lethu elihlanganyelwe lihlome zonke izinto eziyisisekelo zasendlini nezici ezifana nalezi: uhhavini, ihhavini legesi lokupheka, ifriji, i-microwave, i-toaster, iketela, amapani, amapuleti, imimese, izinkezo nezimfoloko ezizosetshenziswa yizo zonke izivakashi zethu. .
Ikhishi lethu lepulani elivulekile kanye negumbi lokuhlala ingeyabo bonke abavakashi ukuba bakusebenzise futhi bakujabulele, nokho, ungase ukuthole okuncane noma ungakusebenziseli nhlobo njengoba kunezindawo zokudlela eziningi ezimangalisayo kanye nedina emnyango wethu!
Siphinde sibe namagumbi okugeza angu-2 ahlanganyelwe
Wonke amalineni ombhede, amathawula njll anikezwa ekamelweni lakho ngaphambi kokuba uhlale
Ifulethi liza: umshini wokuwasha, i-ayina kanye nebhodi loku-ayina.
4.35 out of 5 stars from 71 reviews
4.35 · 71 okushiwo abanye
Ngineminyaka engu-24 ngihlala kule ndawo, ngakho-ke uma ngikhululekile ngizokujabulela ukukuncoma izindawo ezinhle kakhulu ongaya kuzo futhi ngikuqondise ukuthi uhamba kanjani!
Sociology & Media Graduate.
What a day to be alive :)
Nakuba, angihlali efulethini, ngihlala imizuzu engu-2, ngakho-ke uma kunezinkinga noma unemibuzo, ngivele ngifonele kude! :)
Siphinde sisebenze eduze nendawo yokudlela engumakhelwane. Indawo yokudlela ‘yeGreat Nepalese’ eyasungulwa ngo-1982 futhi ihlinzeka ngokudla kwendabuko kwaseNepal. Uma ungathanda ukuzama ukudla kwangempela kwe-Nepalese, sizobe sinikeza isaphulelo sika-20% kubavakashi bethu.